Faah faahin Kasoo baxaysa Qaraxii ka dhacay Gobolka Sh/dhexe | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Faah faahin Kasoo baxaysa Qaraxii ka dhacay Gobolka Sh/dhexe
Faah faahin Kasoo baxaysa Qaraxii ka dhacay Gobolka Sh/dhexe
Wararka ka imaanaya degmada Balcad ee Gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegaya in Maleeshiyaadka Argagixisada ah ee Al-shabaab gaari dad shacab ah ay saarnaayeen ay miino ugu aaseen deegaanka Daniga Baalow oo galbeed ka xiga Balcad, halkaasina ay ku geeriyoodeen ilaa iyo Todobo ruux oo ah dad shacab ah.
Deegaanka Baniga Baalow ayaa 15-km u jira degmada Balcad ee gobolka Sh/Dhexe, waxaana marka laga tago dadka dhintay jira dad kale oo miinadaasi ku dhaawacmay.
Gaariga ayaa la tilmaamay in ay saaraayeen dad gaaraya ilaa iyo 20 ruux oo dhamaatood dad Shacab ahaa kana mid ahaa ganacsatada qudaarta ka ganacada.
Wariyaheena Maxamed Amiin Yabarow ayaa soo sheegaya in gaariga Al-shabaab ay qarxiyeen uu ahaa gaari nuuca loo yaqaano Hoomey, islamarkaana suura gal ay tahay in uu sii kordho qasaaraha dhimashada, maadama deegaankaasi aaney laheyn goobo caafimaad oo dadkaasi lagu baxnaanin karo.
Maleeshiyaadka nabad diika ah ee Al-shabaab ayaa dhivbaatooyin kale duwan ku haaya Shacabka Soomaaliyeed eee aan waxna galabsan sida dil,qarax,boob iyo falal kale oo dhamaan ka baxsan bini aadanimada.
Previous articleSafaaradda Suudaan oo sheegtay in ay Jaamacado ka furayso Soomaaliya
Next articleDowladda Soomaaliya oo cambaareysay weerar Askar ay ku dhinteen oo ka dhacay Masar